Yaa Guulo Badan Kooxaha Banaadir SC iyo Horseed,Iyagoo Is Wajahaya Kulamdii 18-aad Horyaalka Soomaliya Olalaha 2016-2017
Sunday, May 27th, 2018 - 12:51:36
Tuesday August 01, 2017 - 10:22:37 in Wararka by Kubad Bile
Kooxda Banaadir SC ayaa kulankii ugu dambeeyay fasal ciyaareedka 2016-2017 horyaalka Soomaliya soo dhawaynaysa dhigeeda Horseed waxayna labada koox wada ciyaaridoonaan kulankii 89-aad xagaagan.
Wiilasha Banaadir SC kulankii ugu dambeeyay olalahan waxa ay barbaro 1-1 la dhaafi waayeen kooxda Dekedda oo noqotay kooxda horyaalka Soomaliya 2016-2017.
Kooxda Banaadir SC waxa ay fahdisaa booska 4-aad ee kala sareynta horyaalka Soomaliya waxa ay lee dahay 31-dhibcood.
Kooxda kubbada cagta Horseed iyagana kulankii ugu dmabeeyay horyaalka dalka waxa ay barbaro 1-1 la dhaafi waayeen dhigeeda Elman,kooxda Horseed waxa ay ku jiraan kaalinta 5-aad,iyagoo leh 29-dhibcood.
Xaqiiqooyinka Ka Hor Kulanka
Tani iyo xagaagii 2015 kooxda kubbadda cagta Horseed guul weyn kama gaarin kooxda Banaadir SC waxaana kooxda Horseed guul ay ka gaarto Banaadir SC ugu dambeesay afar dhamaadkii koobka Janeraal Daa’uud 2015 kulan ku dhamaaday 1-0.
Tani iyo xagaagii 2015 macalinka reer Uganada Mblangu Hussein ee hogaamiyo kooxda Banaadir SC ma aysan dhicin in guul daro kala kulmo kooxda Horseed.
Tababare Mblangu Hussein ayaa tan 2015 kooxda Horseed wajahay,iyagoo ay hogaaminayaan macalimiin kala duwan sida Cumar Caruus macalinkii hore Banaadir SC iyo Cali Buu oo horay usoo maamulayay kooxaha Dekedda,Horseed,Banaadir SC iyo Singjet.
Edward Karanja ayaa ka hortagay kooxda Banaadir SC,isagoo Macalin u ah,balse labadii xili cityaareed u dambeesay waxaa ugu hor imaaday,isagoo macalin u ahaa kooxda kubbadda cagta Gaadiidka.
Kabtanka kooxda Banaadir SC Daadir Amiin Cali (Daa’daa) ayaa maray qaliin dhanka jilibka,isagoo kooxda Banaadir SC ayaa ciyaarayso Kulankii ugu dambeeyay xili ciyaareedka 2016-2017 horyaalka Soomaliya.
Is Araga Iyo Natiijooyinka Kooxaha Horseed VS Banaadir SC
08/06/2012 Banadir SC 1:1Horseed SC
30/09/2012 Horseed SC 0:2 Banadir SC
18/11/2013 Horseed SC 2:2 Banadir SC
22/02/2015 Horseed SC 0:2 Banadir SC
24/05/2015 Banadir SC 5:0 Horseed SC
04/02/2016 Horseed SC 0:0 Banadir SC
29/04/2016 Banadir SC 2:0 Horseed SC
13/03/2017 Horseed SC 0:3 Banadir SC
Kooxaha: - Banaadir SC VS Horseed
Cimiladda Xiliga Ciyaarta: - 25°
Garsoore:-Xasan Maxamed Xaaji